Daawo dhacdo la yaab leh oo ka dhacday Yemen “Owr laga wedi waayey qabriga ninkii lahaa” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: TV-ga Aljazeera ayaa baahiyey muuqaal la yaab leh oo laga soo duubay tuulo ku taalla gobolka IB ee dalka Yemen.
Nin lagu magacaabi jiray Xaaji Cali Nacnac oo geeriyooday ayaa la aasay maalintii talaadada ee 6-dii bishaan Janaayo 2015, hase ahaatee waxaa la yaab noqotay in Rati ama owr uu laha laga wedi waayey qabrigiisa.
Ehelka Marxuum Xaaji Cali ayaa ku qasbay owrkaas iney qabriga ka wadaan hase ahaatee waxaa mar kale lagu arkay isagoo taagan qabriga dushiisa, arrintaas oo noqotay wax la yaab leh oo aan horay loo arag.
Dadka tuulada iyo tuulooyinka deriska la ah ayaa kusoo xoomay goobta qabrigaasi ku yaallo ee ratiga laga wedi waayey, waxeyna ka qaaden sawirro, iyadoo qaarka ka duubeen filim muuqaal ah.
Allah Subxaanahu Watacaala ayaa garanaya sababta keentay in owrkaas dul taagnaado qabriga ninkii lahaa ee geeriyooday, iyadoo muddo todobaad ah laga joojgo waqtigii la aasay.
Fur link-ga hoose si aad u daawato muuqaalkaas, haddii uu kuu furmi waayo copy dheh oo ku fur bog cusub.